Fianakaviam-piteny sino-tibetana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fiteny sino-tibetana)
Ny fiteny sino-tibetana dia fianakaviam-piteny any Azia Atsinanana sy Azia Atsimo Atsinanana sy Azia Afovoany ary Azia Atsimo. Isan'io fianakaviam-piteny io ireo fiteny sinoa izay ahitana fiteny folo tetenin'ny olona miisa 1 350 000 000 any ho any, sy ireo fiteny tibeto-birmana izay ahitana fiteny miisa 330 any ho any ary tenenin'ny olona miisa 70 000 000 any hoany.
Ilay mpokaroka atao hoe Laurent Sagart dia nanolo-kevitra ny hampiditra ny fianakaviam-piteny sino-tibetana sy ny fianakaviam-piteny aostroneziana ao amin'ny fianakaviambem-piteny atao hoe sinotinetana-aostroneziana. Ireo fiteny aostronesiana izay miely hatraty Madagasikara ka hatrany amin'ireo nosin'i Pasifika dia samy nipoitra avy any Taioàna, sady manana voanteny mifanahaka endrika sy hevitra amin'ireo fiteny formiziana.
1 Ireo sampam-piteny ao amin'ny fianakaviam-piteny sino-tibetàna
1.3 Ny sampam-piteny lolo-birmàna na lolo-bormezy
Ireo sampam-piteny ao amin'ny fianakaviam-piteny sino-tibetànaHanova
Ny sampam-piteny lolo-birmàna na lolo-bormezyHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fianakaviam-piteny_sino-tibetana&oldid=979614"
Dernière modification le 13 Janoary 2020, à 15:42